အဓိပ္ပါယ်ပါလွန်းတဲ့ အကြည့်တွေကြောင့် အများရဲ့ထင်မြင် စနောက်ခြင်း ခံနေရတဲ့ မင်းမော်ကွန်းနဲ့ ထွန်းထွန်း – Online News Post
အဓိပ္ပါယ်ပါလွန်းတဲ့ အကြည့်တွေကြောင့် အများရဲ့ထင်မြင် စနောက်ခြင်း ခံနေရတဲ့ မင်းမော်ကွန်းနဲ့ ထွန်းထွန်း
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မင်းသားချော နှစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ထွန်းထွန်း နဲ့ မင်းမော်ကွန်း က အနုပညာ အလုပ် တွေကို အတူတူ တွဲဖက်လုပ်ကိုင် ခဲ့ကြပြီး နောက် ဆုံးရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့ “ လေးပါးကျော့ရှိန် ဝရဇိန် ” ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားမှာ လည်း ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချီးကျူး ခြင်းကို ခံခဲ့ ရသူတွေ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဒါ့အပြင် ထွန်းထွန်း နဲ့ မင်းမော်ကွန်း က နှင်းဆီအဖွဲ့ နဲ့ အ တူတူ လူရွှင်တော်တွေ အဖြစ် ပါဝင် နေကြပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ညီအစ်ကို ရင်းတွေလို ခင်မင် ရင်းနှီး ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ် ပါတယ် … .
နှင်းဆီ အဖွဲ့ရဲ့ ညီအစ်ကို တွေပီပီ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အရမ်း ချစ်ပြီး အမြဲတမ်း စစ နောက်နောက် ရှိကြ တဲ့ မင်းမော်ကွန်း နဲ့ ထွန်းထွန်း က ဒီကနေ့ မှာလည်း ပရိသတ် တွေနဲ့တကွ ခင်မင် ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ စနောက်ခြင်း ကို ခံနေရ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ မင်းမော်ကွန်းနဲ့ ထွန်းထွန်း တို့က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အသက် ဝင်လွန်း တဲ့ အပြန်အလှန် အကြည့်တွေ ကြောင့် ပရိသတ် တွေက သဘောကျ နေရတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … .
မင်းမော်ကွန်း နဲ့ ထွန်းထွန်းတို့ ကတော့ ရည်ရွယ်ထားခြင်း မရှိတဲ့ အကြည့်တွေ ကြောင့်ပဲ ပရိသတ် တွေ က သို့လော သို့လောနဲ့ စနောက် နေကြတာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ်ကြီး လည်း မင်းမော်ကွန်း နဲ့ ထွန်းထွန်း တို့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ကြည့်ပြီး သဘောကျ နေကြမယ် ထင်ပါ တယ် ။ ဖတ်ရှုပေး ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး လည်း သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ် … .
ပရိသတ္ေတြရဲ့ အခ်စ္ေတာ္ မင္းသားေခ်ာ ႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ထြန္းထြန္း နဲ႔ မင္းေမာ္ကြန္း က အႏုပညာ အလုပ္ ေတြကို အတူတူ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ ဆုံးရိုက္ကူး ခဲ့တဲ့ “ ေလးပါးေက်ာ့ရွိန္ ဝရဇိန္ ” ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမွာ လည္း ပရိသတ္ေတြ ရဲ့ ခ်ီးက်ဴး ျခင္းကို ခံခဲ့ ရသူေတြ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဒါ့အျပင္ ထြန္းထြန္း နဲ႔ မင္းေမာ္ကြန္း က ႏွင္းဆီအဖြဲ႕ နဲ႔ အ တူတူ လူရႊင္ေတာ္ေတြ အျဖစ္ ပါဝင္ ေနၾကၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ညီအစ္ကို ရင္းေတြလို ခင္မင္ ရင္းႏွီး ခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္ … .
ႏွင္းဆီ အဖြဲ႕ရဲ့ ညီအစ္ကို ေတြပီပီ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အရမ္း ခ်စ္ၿပီး အျမဲတမ္း စစ ေနာက္ေနာက္ ရွိၾက တဲ့ မင္းေမာ္ကြန္း နဲ႔ ထြန္းထြန္း က ဒီကေန႔ မွာလည္း ပရိသတ္ ေတြနဲ႔တကြ ခင္မင္ ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ့ စေနာက္ျခင္း ကို ခံေနရ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ မင္းေမာ္ကြန္းနဲ႔ ထြန္းထြန္း တို႔က တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အသက္ ဝင္လြန္း တဲ့ အျပန္အလွန္ အၾကည့္ေတြ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြက သေဘာက် ေနရတာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
မင္းေမာ္ကြန္း နဲ႔ ထြန္းထြန္းတို႔ ကေတာ့ ရည္ရြယ္ထားျခင္း မရွိတဲ့ အၾကည့္ေတြ ေၾကာင့္ပဲ ပရိသတ္ ေတြ က သို႔ေလာ သို႔ေလာနဲ႔ စေနာက္ ေနၾကတာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပရိသတ္ႀကီး လည္း မင္းေမာ္ကြန္း နဲ႔ ထြန္းထြန္း တို႔ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ ပုံရိပ္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး သေဘာက် ေနၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္ ။ ဖတ္ရႈေပး ၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီး အားလုံး လည္း သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ေန႔ေလး တစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ နိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပး လိုက္ပါတယ္ … .
Previous post ရိုင်းစိုင်းစွာ ရေးသားပြောဆိုခဲ့သူကို ထိမိစွာနဲ့ ပြောဆိုချေပလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်
Next post သတို့သမီးဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီး ပျော်မြူးနေတာလေးကို ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို ချပြရင်း သူမပရိတ်သတ်တွေကို အလင်းပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း